TAKELAKA MANOKANA HO ANTSIKA MPIKAMBANA | TAMIFA Madagascar
TAKELAKA MANOKANA HO ANTSIKA MPIKAMBANA
Misy ny fiteny hoe « ny rano no tsy mandà midina,ary ny olombelona kosa dia tsy mandà miakatra ».Isan’izany no mahatonga antsika mifanentana hatrany ny amin’izay fomba rehetra hisondrotana eo amin’ny fiainana . Sehatra natao hifanampiana sy notefena hiampitana ho amin’ny tsaratsara rahateo no hifanajariana anaty Fikambanana.
Ity takelaka eto ity dia narafitra manokana ho antsika Mpikambana.Ankoatr’ireo sokajin-dahatsoratra sy tahirin-kevitra samihafa efa ifampizaràna mahazatra ato amin’ny tranonkala dia omen-daka kokoa isika mpikatroka tsy an-kanavaka mba haranitra sy hatanjaka amin’ny fiatrehana ny asam-pikambanana sy fampivoarana mivantana ny tenantsika tsirairay avy.
Ampiasaina rahateo ny fifehezana ny teknolojia misy ahafahana misintona fandrosoana arak’izay filàna mifanandrify amintsika.Ny dingana izay tontosaina miandalana dia ny hampiainana tanteraka ara-elektronika ny TAMIFA Madagascar isan’ambaratonga sy ny Mpikambana ao aminy (Gestion via web).
Amin’ny maha-raharaha anatiny azy ity anefa dia tsy ampahibemaso ho an’ ny daholobe ny tolotra entina eto.Anjarantsika noho izany ny mangataka amin’ny tompon’andraikitra ny Kaody miafina amin’izay itakiana izany.